Procreate 3 dia mandray ny iPad Pro sy Apple Pencil | Vaovao IPhone
Iray amin'ireo fampiharana sary matihanina malaza indrindra amin'ny takelaka Apple dia tsy isalasalana fa Procreate, ny ekipa fampandrosoana dia namoaka ny kinova fahatelo an'ny fampiharana malaza miaraka amina endrika vaovao maromaro. Ary ireo dia tsy voafetra mazava tsara amin'ny fampidirana borosy vaovao, fitenin'ny fihetsiketsehana, ny fomba fijery ary ny fifandraisana amin'ny fihetsika, ary ankehitriny ny fampiharana dia mifanentana tanteraka amin'ny iPad Pro sy Apple Pencil Noho ny tsy ho ela ny fandefasana azy, mamela antsika hamorona sary misy famahana mahavariana sy mampifanaraka ny fitaovana farany Cupertino izay havoaka amin'ity volana ity.
Tsy mijanona eto ny vaovao, avy amin'ny iPad Air 2 dia afaka mamorona sary miaraka amin'ny vahaolana 8000 x 4000 ihany koa isika, tsy ratsy izany. Inona koa, Procreate dia nampiasaina tamin'ny fampisehoana ny iPad Pro hanehoana ny fahaiza-manaon'ny Apple Pencil azony omena antsika, indrindra raha ny fahitana ny firongan'ny fahatsapana sy ny fahatsapana ny tsindry, izay ilay pensilihazo Apple vaovao malaza no hadisoana tsara. Ny andiana borosy vaovao tafiditra ao amin'ny Procreate dia natao mazava tsara mba hahitantsika ny fahaizan'ny Apple Pencil.
Ho fanampin'izay, Procreate dia nanamaivana ny valin'ny efijery sy ny fahamaimaizan'ny fidirana, mampihena ny lagika amin'ny fanaovana sary ary mampino antsika fa manao sary amin'ny taratasy izahay. Ity rindrambaiko ity dia mitentina 5.99 € fotsiny ao amin'ny iOS App Store ary misy maro izay mampiasa azy io tsy tapaka mba hamelana ny eritreriny hisidina amin'ny takelaka miaraka amin'ny penina optika. Ity dia iray amin'ireo rindranasa maro izay mandray ny iPad Pro, na dia hitranga mandritra ny fotoana fohy aza izany ary aorian'ny fanombohana ny iPad Pro, koa miomàna handray vaovao marobe, toy ny mahazatra, ho eto izahay hilaza izy rehetra dia izy rehetra, miaraka amin'ny Actualidad iPad dia tsy ho diso fanantenana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Procreate 3 dia mandray ny iPad Pro sy ny Apple Pencil
Toy ny fanehoan-kevitra iray, ny iPad pro dia tsy manana 3D Touch, ny pensilihazo toy ny wacom izay manana haavon'ny tsindry .. Zahao ireo loharano azonao
Salama tsara Alejandro.
Nahitsy ny lesoka iray tamin'ny fanoratana. Misaotra tamin'ny fampitandremana sy tamin'ny famakiana anay. Mirary ny soa indrindra.
Navaozina i Dropbox mamela ny fitehirizana pejy Safari
Runtastic Moment Classical, famakafakana ity famantaranandro ity amin'ny rivotra azo entina